युगसम्बाद साप्ताहिक - नेपाल यो चक्रब्यूहबाट कसरी मुक्त होला ?
Wednesday, 10.16.2019, 02:42pm (GMT+5.5) Home Contact
नेपाल यो चक्रब्यूहबाट कसरी मुक्त होला ?
Tuesday, 12.15.2015, 12:11pm (GMT+5.5)
संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा संविधानसभा बहिष्कार गरेर मधेश आन्दोलन गर्न तराई झरेका मधेशवादी नेताहरू दिल्ली दर्शनबाट काठमाडौं फर्किएका छन् । संविधानसभाबाट राजिनामा गरेर आन्दोलनमा गएका मधेशवादी मोर्चासंग आवद्ध दलहरू संसदमा भने सामेल भएका छन् । संविधान निर्माणका बेला संविधानसभाभित्रै आफ्ना मागहरू राख्नपाउने र दवाव सिर्जना गर्नसक्ने अवसरलाई उनीहरूले उपयोग गर्न सकेनन् तर अहिले उनीहरूले राखेका सवै माग पूरा गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्नेउनीहरूको माग छ । चार महिनादेखि तराईमा मधेश आन्दोलन चलाएर सिङ्गो नेपालमा मानवीय सङ्कट खडागर्न एक किसिमले सफल भएका मधेशी नेताहरूले व्यवस्थापिका संसदमा फर्केपछि संसद पनि चल्न दिएका छैनन् । भारत सरकारको निम्तो पाएर दिल्ली दर्शन गर्न गएका नेताहरूले चार दिनको त्यहाँको बसाइमा विदेश मन्त्री, विदेश सचिव, प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार लगायतका थुप्रै अधिकारीहरूलाई भेट्ने अवसर पाए– आफ्ना गुनासाहरू पोखे । उनीहरूको भनाइमा मधेश आन्दोलनबारे फैलाइएको भ्रम चिर्न उनीहरू सफल रहे । उनीहरू दिल्लीमा नै रहेको बेला भारतको राज्यसभामा नेपालमा गरिएको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा पारेको नकारात्मक असरबारे गहन चर्चा पनि भयो । नेपालमा मानवीय सङ्कट खडा गरेर भारत सरकारले छिमेकी मित्रराष्ट्र नेपालमाथि ठूलो अन्याय गरेको कुरा त्यहाँ गुञ्जियो र अभिलेखित भयो । मधेश आन्दोलन चलाइरहेका दिल्ली आमन्त्रित चार नेता मध्ये तीन नेताले चुनाव हारेका, संविधानसभाभित्रका अत्यधिक मधेशी सभासद्हरूले संविधानसभामा मतदान गरेका र थोरै मधेशी सभासद्ले मात्र बहिष्कार गरेको तथ्य पनि भारतको राज्यसभामा गुञ्जित भयो र जनमत गुमाएका नेताहरू लज्जित हुनुपर्याे । यो प्रत्यक्ष देखिएको एउटा पाटो हो ।
मधेश आन्दोलन अहिले पनि जेनतेन चलिरहेको छ । यो आन्दोलनको सूत्रधार को हो र यो कुन दिशातिर लक्षित छ भन्नेवारे यसबीचमा धेरै बहस भएका छन् । भारतको सत्ताधारी पक्षले आफ्नो कडा निर्देशनलाई नेपालका संविधान निर्माताहरूले अन्तिम चरणमा आएर उपेक्षा गरेको महशुस गरेर सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जाहेर गरे । तराईमा मधेश आन्दोलनको सूत्रपातको पृष्ठभूमि पनि त्यही हो भन्ने कुरा झरीपछिको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । भारतीय सत्ता विगतमा नेपालमा संघीयता थोपर्न सफल भयो । अहिले सीमांकनका नाममा तराईलाई पहाडबाट अलग गरी दुई मधेश प्रदेश बनाउने रणनीतिक अभियानमा छ । अहिले पूरै तराईलाई पहाडबाट अलग पार्ने र तराई प्रदेशमा कृतिम नागरिकताधारीहरूको बहुमत खडा गरी आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा उठाउन लगाई त्यो भूभागलाई नेपालबाट अलग गर्ने र क्रमशः भारतमा विलय गराउने अनि पहाडलाई घेराबन्दी गरेर भारतमा विलय हुन बाध्य पार्ने उसको दीर्घकालीन रणनीति रहेको नेपालभित्र खुला चर्चाको विषय बनिरहेको छ । हिमाललाई आफ्नो सुरक्षा रेखा भन्दैआएको भारतले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि अनेक तरिकाले धावा बोल्दैआएको छ । समय धेरै बदलिइसकेको र भारत बेष्ठित स्थितिबाट पनि नेपाल मुक्त भैसकेको भए पनि भारतीय सत्ताधारीहरू नेपाललाई १९५० ताकाकै आँखाले हेरिरहेका छन् । उनीहरूको दृष्टिदोष हटेको छैन । भारतीय सत्ताधारीहरूको बेलायती साम्राज्यबाट बिराशतमा पाएको गुलामी मानसिकता अझै हटेको छैन । भारतको नेपाल लगायत कुनै पनि छिमेकी देशसित सुमधुर र विश्वसनीय सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्नुको कारण नै त्यही हो । नेपालले बेला बेलामा भारतबाट दुस्ख बेसाइरहनुको कारण पनि यही नै हो ।
तराईमा सुरू गराइएको मधेश आन्दोलनले भारतीय सत्ताको अहंतुष्टि हुने गरी नेपालमा दवाव सिर्जना गर्न नसकेपछि नेपालमा चरम संकट उत्पन्न गराई चर्काे दवाव सिर्जना गरेर पाठ पढाउने र नेपाललाई आफ्नो काबुमा ल्याउने उसको चाहना पूर्तिका लागि अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरेको हो । चार महिनाको यो अन्तरालमा नेपाली जनता नझुकेका, चरम अभाव खेपेर पनि राष्ट्रियता जोगाउन दरोसंग उभिएका र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको भारतभित्रै र विश्वव्यापी बिरोधको लहर चलेकाले त्यसलाई मन्थर गर्न भारतीय सत्ताधारीहरूले नयाँ चाल चलेका छन् । चार महिनाको अन्तरालमा नेपालभित्रै अनेक चाल चलिए । भारतीय राजदुतको गैरकुटनीतिक चलखेल चरमरुपमा देखियो । उसले विभिन्न आवरण दिएर पालित पोषित गरेकाहरूलाई भरपुर उपयोग गर्याे । तर पनि नेपाल विचलित नभएको देखेपछि अघोषित नाकाबन्दीको अपगाल मधेशी नेताहरूको टाउकोमा भिराउन उनीहरूलाई दिल्लीमा बोलाएर नाकाबन्दी भारतले गरेको होइन हामीले गरेका हौं भन्न लगायो । खेतालाहरूको हैसियत कति हुन्छ भन्ने कुरा दुनियालाई थाहा छ । विश्वजगत अन्धो छैन ।
तराईमा रचिएको मधेश आन्दोलन र त्यसको बलले नपुगेर भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको चौतर्फी असर छ । नेपालमा इन्धनको अभाव जीवन रक्षक औषधिको अभाव, खाद्यान्नको अभाव अघोषित नाकाबन्दीका उपज हुन् भने कथित आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड र उदण्डताको प्रदर्शन विकृतिको अर्काे पाटो हो । मधेश आन्दोलनले तराईमा लाखौं बालबालिकालाई पढ्नबाट वञ्चित गर्याे, तराईवासी लाखौं मजदुरको रोजिरोटी खोसियो, औषधिमुलो नपाएर कैयौं बेरामी अक्करमा परे, लाखौं परिवारको चूलो बल्न छोड्यो । तराईका किसानले दुस्खजेलो गरेर उत्पादन गरेको तरकारी र अन्नपातले बजार पाएन । उद्योग धन्दा बन्द भए, राज्यले अर्बाैं अर्ब राजस्व गुमायो । सीमावर्ती क्षेत्रका हजारौंहजार केटाकेटी तस्करीका लागि उपयोग गरिए । उद्दण्ड जमात खडा गरेर आफ्नै भाईबन्धुलाई पेट्रोल छर्केर जलाउनेसम्मका अमानवीय हर्कतहरू भए । राज्यले पनि अपराध कर्मलाई नियन्त्रण गर्न सकेन । धेरै अनर्थ भयो । यस्ता विकृतिजन्य गतिविधिबाट मुलुकले धेरै चिज गुमाएको छ । विदेशीको चक्रब्यूहमा फँस्दैगएकाले नै देशको यो हालत भएको हो ।
नेपाल यो चक्रब्यूहबाट कसरी मुक्त होला ? अहिले सवै नेपालीको मनमा यही चिन्ता जागृत छ । मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने नाममा राष्ट्रिय अखण्डता र क्षेत्रीय सद्भावमाथि नै आँच पुर्याउने काम हुने हो कि भन्ने चिन्ता एकातिर बढिरहेको छ भने अर्कातिर सत्तास्वार्थका लागि भारतसंग अनपेक्षित गोप्य सम्झौताहरू पो हुने हुन् कि भन्ने अर्काे चिन्ता थपिएको छ । मधेशी नेताहरूले दिल्लीबाट के के पाठ लिएर आए भन्ने कुराको रिहर्सल हेर्न पनि त्यति धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । अहिले देशका सामु खडा भएका चुनौतिहरूको सामना नेपाली जनताबीचको अटुट एकता र राष्ट्रप्रेमको उच्च भावनाले मात्र गर्न सकिन्छ ।